पहिलो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा किन आएनन् शेखर कोइराला? :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
पहिलो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा किन आएनन् शेखर कोइराला?
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक शनिबार सानेपामा बस्यो।
सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित शेखर कोइराला भने पहिलो बैठकमै अनुपस्थित रहे। देउवासँग सभापतिमा हार्दा शेखरले ४० प्रतिशत मत ल्याएका थिए।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी १३४ जनालाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएलगत्तै सभापति देउवाको अध्यक्षतामा पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो।
कांग्रेस विधानअनुसार सभापतिमा पराजित व्यक्ति स्वत: केन्द्रीय सदस्य हुन्छ। जसअनुसार शेखरलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिराख्नुपर्दैन।
पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार कोइराला आएनन्। बरू उनी चितवन पुगेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक चल्दै गर्दा शेखर भने चितवनको देवघाटमा कोइराला सेवा समाजको नवौं महाधिवेशन सम्बोधन गर्दै थिए।
त्यहाँ उनले आफूले सभापति हारे पनि एजेन्डालाई स्थापित गरेको बताएका थिए।
शेखरनिकट एक नेताका अनुसार कोइरालाले पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। महाधिवेशन सकिएपछि कांग्रेसमा वरीयता सम्बन्धी विवाद देखा परेको छ। कसलाई कुन वरीयतामा राख्ने भन्ने कांग्रेसमा कुनै नियम भने छैन।
आफूपछि कुन नेतालाई वरिष्ठ नेतालगायत वरीयतामा स्थान दिने सभापति देउवाको व्यक्तिगत निर्णय हो। देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दै वरिष्ठ नेता बनाउन चाहेका छन्। पौडेल यो महाधिवेशनको प्रक्रियाभन्दा बाहिर नै रहेका थिए।
सभापतिमा दोस्रोपटक आफूलाई सहयोग गरेका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरूङ र सभापतिमा पहिलेदेखि नै समर्थन गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने तयारीमा देउवा छन्।
विधानमा नभएको वरिष्ठ नेताको पदमा भने रामचन्द्रलाई नै निरन्तरता दिने तयारी देउवाको रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए। कांग्रेस विधानमा वरिष्ठ नेताको पद कल्पना गरिएको छैन तर कांग्रेसमा सभापतिमा हार्ने व्यक्ति प्राय: वरिष्ठ नेता हुने परम्परा छ।
कांग्रेसमा वरियता विवाद भने शनिबारको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकदेखि फेरि सतहमा आएको छ।
शेखरले यही वरीयता चाहिन्छ भनेर अडान औपचारिक रूपमा राखेका छैनन्। तर सभापति देउवा र नेता पौडेलभन्दा पछि तेस्रो वरीयतामा शेखरलाई राख्नुपर्ने उनीनिकट नेताहरूको माग छ।
शेखरलाई १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १३ पदाधिकारीपछि १४ औं वरीयतामा राख्ने कुरा भए पनि शनिबार उनको वरीयता २० नम्बरमा पुर्‍याइएको थियो। अब नेता पौडेल लगायतलाई मनोनीत गरेपछि झन् शेखरको वरीयता तल जाने सम्भावना छ।
अहिले सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरूङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, आठ सहमहामन्त्री पछि यो केन्द्रीय समितिमा रहेका पूर्वपदाधिकारीलाई वरीयतामा शेखरभन्दा माथि राखिएको छ।
१३ जना पदाधिकारीपछि गोपालमान श्रेष्ठ, शशांक कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, सुनिलबहादुर थापा, चित्रलेखा यादव र शेखर कोइरालाको नाम वरीयता क्रममा छ।
१३ औं महाधिवेशनमा शेखरको वरीयता ३६ औं नम्बरमा थियो यद्यपि उनले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा जितेका थिए।
कांग्रेसमा विगतमा पनि वरीयता क्रममा विवाद देखापर्ने गरेको थियो। सभापतिमा हारेकालाई वरिष्ठ नेता मान्ने परम्परा पनि थियो।
१३ औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा हारेका रामचन्द्र वरिष्ठ नेता भएका थिए। अहिले देउवासँग सभापतिमा हारेका शेखरलाई भने २० औं वरीयतामा राखिएको छ।
'रामचन्द्र, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत पूर्वपदाधिकारीलाई देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेपछि अझै शेखरको वरीयता पछि पुग्छ,' कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, 'शेखरले पनि यो विषयलाई उठान गर्दै जानुभयो भने यो विषय पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ।'
विगतमा पनि वरीयता क्रम मिलाउन दबाब दिँदै कांग्रेस नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा 'नोट अफ डिसेन्ट'समेत राख्ने गरेका थिए।
शेखरलाई सभापति र पदाधिकारीपछि अहिले १४ नम्बर वरीयतामा राख्ने गरी छलफल पनि गरिएको थियो। तर देउवा पक्षका नेताले त्यो स्वीकार नगरेको एक नेताले दाबी गरे।
‘पार्टीका सिनियर नेता, सदस्य र पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीभन्दा जुनियर नेतालाई सभापतिभन्दा पछिको स्थान दिन हुन्न,’ देउवानिकट एक नेताले भने।
अहिलेको केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा पक्षका ८२ प्रतिशतले जितेका छन् भने ३३ जना केन्द्रीय सदस्य अझै सभापति देउवाले मनोनीत गर्न बाँकी छ।
शेखरको सचिवालयले भने वरीयताबारे औपचारिक जानकारी दिन मानेको छैन।
कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिमा पनि कसैले यसबारे औपचारिक धारणा राखेका थिएनन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले राखेका प्रस्तावहरू हलले पारित गरेको थियो।
धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्दा सभापतिको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नेजस्ता निर्णय केन्द्रीय समितिले पारित गरेको थियो।
पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई धारणा राख्न समय दिइएको थिएन। सभापति देउवाले 'क्रिसमस भएको र बिदा'समेत भएको उल्लेख गर्दै एकैछिनमा बैठक सकेका थिए।
कांग्रेसमा १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहे पनि ३३ जना मनोनीत गर्न बाँकी छ। कोषाध्यक्ष पनि मनोनीत हुन बाँकी छ। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचित सभापतिसहित १३४ सदस्यमध्ये शनिबार प्रमाण पत्र लिने कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाण, सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायत केही अनुपस्थित रहेका थिए। गृहमन्त्रीसमेत रहेका खाण र नेता पाण्डे भने गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा गएका थिए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १०, २०७८, ०६:३८:००